Diiwan lagu muujinayo kaaalinta jilayaasha madowga ah ee Iswedhen - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Björn Rosengren, Ellen Nyman och Hynek Pallas i Nya vågen. Foto: Foto: Scanpix/Martin Mydtskov
Diiwan lagu muujinayo kaaalinta jilayaasha madowga ah ee Iswedhen
La daabacay torsdag 28 februari 2013 kl 11.30
Dadka jinsiga madoow ee ka shaqeeya arimaha dhaqanka ee Iswedhen waa la qariyaa marka la soo saarayo arimaha dhaqan, marka keliya ee la muujiyana waa marka ay matalayaan midabkooda.
Sidaas waaxaa aaminsan urur arimo dhaqanmeed la yiraahdo Tryck, kaas oo hada soo saarey diwaan ay u bixiyeen "he Black List" oo ay ku qoranyahiin dadyowga Iswedhen ee ka shaqeeya arimaha dhaqanka ee asalkooda afrikaanka yahiin.
Khalid Adan Qeyre waxa uu ka shaqeeya tiyaaterka islamarkaana waa majaajileyste, waxuuna aaminsanyahay diiwaankan Black List uu meesha ka saarayo marmarsiiyaha ah in soo saarayaasha yiraahdaan manaqaano jilaa madow ah.
- Marmarsiiyaha buu meesha ka saarayaa. Aniga laftirkeyga waan kamid ahay "The Blacklist" oo waxaan ku biirey sadex ama afarbilood ka hor. Waan ogsoonahay sabta keentey liiskaas, waxana weeye in marmarsiiyahaas mesha laga saaro. Laakiin dadka hadii ay marmarsiiyo raadinayaan marmarsiiyo ma weynayaan, ayuu yeri Khalid Adan Qeyre.
Diiwaankaan uu hirgeliyey urur dhaqameedka Tryck ayaa loogu talo galay in Dadyowga madowga ah ee reer Iswedhen ee ku howlan arimaha kale gedisan ee dhaqanka in ay iska diiwaan geliyaan liiskan The black list, kaas oo kabacdiina loo dirayo dhammaan soo saarayaasha, agaasimayaasha iyo rool qaybiyaasha filimada iyo riwaayada.
Ururka Tryck ayaa ah urur dhaqanmeed samefal ah oo la aasaasey sadex sanno ka hor. Si loo muujiyo dadyowga madowga ah ee ka shaqeeya arimaha dhaqanka. Ururkan waxa uu doonayaa in uu dood ka dhaliyo kaalinta uu midabka ka dhex leeyahay laamaha dhaqanka.
Kalid Adan Qeyre ayaa qaba in badanaa soo saariyaashu markey roolalka qabenayaan aysan akterada madowga aheyn dooqooda koobaad balse keliya loo baahdo marka la rabo in uu matalo midabkiisa.
Lakiin waxa uu sidoo kale aaminsanyahay in aysan arintaan guud ahaan salka ku heynin cunsurinimo iyo midab takoor balse ay salka ku heyso suuqada show busnesska oo ah mid ahmiyad siinaya lacagta iyo inta tiked oo la gadi karo.
- Runta hadaan walaal kuu sheego waxaan aniga aaminsanahey in aysan arintaan cusrinimadu ugu weyney. wax welba waxa weeye lacag ama intressti. Intee qofkaan ka faa'idi karnaa, intee tiked baan gadi karnaa? Ayaan aaminsanahey in ay ugu weyntahay., ayuu yeri Khalid Adan Qeyre.